स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले पूर्वसचिव भीम उपाध्यायलाई ‘अपराधी’ भनी आरोप लगाएका छन् । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको समाचारसँगै पूर्वसचिव उपाध्यायले कोइरालाविरुद्ध ट्विट लेखेपछि जवाफमा स्वास्थ्यसचिव कोइराला क्रुद्ध बनेका हुन् ।
पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले आफ्नो हृयाण्डलबाट एउटा ट्विट गरेका थिए । ट्विटबाट उनले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा संलग्नहरु पदमुक्त हुने दावी गरेका थिए ।
उनले ट्विटमा भनेका थिए, ‘भोलि आईतबारसम्म विष्णु रिमाल, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, स्वास्थ्यसचिव यादव कोईराला र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ पदबाट हटे भने भने अचम्म नमान्नु होला । नभए होलसेलमै पदमुक्त हुन बाध्य हुनसक्छ ।’
त्यसको जवाफमा एक घण्टापछि स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालाले उपाध्यायमाथि आक्रोश पोखेका छन् । उनले पूर्वसचिव उपाध्याय मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै आफ्नो चरित्रहत्या नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
उनले ट्विटमा भनेका छन्, ‘भीमजी, मेलम्चीमा यहाँले भ्रष्टाचार गरेको समाचार पढ्दा मलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो । हेक्का रहोस्, अपराधीले अरुलाई पनि अपराधी नै देख्छन् । म देश र जनताको नोकर हुँ । तपाईजस्तो अहंकारी अपराधी होइन । म अपराधी र देशद्रोही होइन, फेरि पनि हेक्का रहोस् । कोठामा बसेर अरुको चरित्र हत्या नगर ।’
मेडिकल सामग्री खरिद घोटालाको समाचार ‘ब्लक’ : प्रधानमन्त्री ओलीकै आइटी विज्ञ समलग्नताको खुलाशा !
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले मुख खोले, भने मेरो परिवारलाई टर्चर दिने काम भयो
स्वास्थ्यमन्त्री ढकालमाथि राजीनामाको दबाब बढ्यो, के गर्लान प्रधानमन्त्रीले, कसले के भन्याे ?
र्‍यापिड टेस्ट कीटमा प्रश्न उठेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुख खाेल्याे (विज्ञप्तिसहित)
'स्वास्थ्य सामग्री किन्दा एक पैसो भ्रष्टाचार भएको छैन : स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल